Yan Aung: ပုံစံခွက်သီအိုရီ
တံခါးမကြီး တစ်ချပ် ကျွီခနဲ ပွင့်သွားခဲ့သည်….
သူ၏ ခြေလှမ်းများက ခန်းမကျယ်ကြီး တစ်ခုအတွင်းသို့ အလိုအလျောက် လှမ်းဝင်သွားခဲ့သည်။
အောက်ကိုငုံ့ကြည့်မိလိုက်တော့မှ သူသည် အလိုအလျောက် ရွေ့လျားနေသော ခါးပတ်ပြားကြီးတစ်ခုပေါ်တွင် မတ်တပ်ရပ်နေမိသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။
ခန်းမကျယ်ကြီးထဲတွင် ဇွန်းသံပန်းကန်သံများ ဆူညံနေကြလေသည်။
အချို့နေရာတွင်မူ မီးရောင်များ မှိတ်လိုက်လင်းလိုက်ဖြင့်တစ်မျိုး၊ အချို့နေရာတွင်မူ တစ်စုံတစ်ယောက် ပြောကြားနေသည်ကို လေးစားယုံကြည်စွာဖြင့် နားစိုက်ထောင်နေကြသူများက တစ်ဖုံ၊ အချို့နေရာတွင်မူ မိမိတို့စိတ်ကြိုက် ပျော်ပါးစားသောက်နေကြသူများက တစ်နည်းဖြင့် ခန်းမကျယ်ကြီးအတွင်းတွင် စည်ကားသိုက်မြိုက်နေလေသည်။
သူတို့အားလုံးသည် စားပွဲဝိုင်းကြီးများတွင် ကိုယ်စီကိုယ်ငှ ၀ိုင်းဖွဲ့ထိုင်နေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ အချို့သောသူများသာ တစ်ကိုယ်တည်း တိတ်ဆိတ်စွာ စားသောက်ရင်း ခန်းမကျယ်ကြီးကို ခံစားချက်မဲ့စွာ စိုက်ကြည့်နေကြလေသည်။ အချိူ့ကမူ တစ်ကိုယ်တည်း ထိုင်နေသော်လည်း သူ့ကို ၀ိုင်းဖွဲ့စကားပြောလာသူများကို ဖော်ဖော်ရွေရွေဖြင့် ပြန်လည် စကားပြောရင်း ထိုသူများထွက်ခွာသွားသော အခါတွင်မူ တစ်ယောက်တည်း ခေါင်းတဆတ်ဆတ် ငြိမ့်ရင်း လျှို့ဝှက်စွာ ပြုံးနေတတ်ကြလေသည်။
ခန်းမကျယ်ကြီးကား ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသလို လျှို့ဝှက်နက်နဲမှုများဖြင့်လည်း ပြည့်နှက်နေခဲ့လေသည်။
ယခု ထိုခန်းမကျယ်ကြီးအတွင်းသို့ သူရောက်ရှိနေခဲ့လေပြီ….
လွတ်နေသော စားပွဲဝိုင်းတစ်ခုတွင် မရဲတရဲ သူဝင်ထိုင်လိုက်ခဲ့သည်။
တစ်စုံတစ်ယောက်က သူ့နောက်မှရပ်ပြီး ပြောလိုက်သည်ဟု ခံစားမိလိုက်သည်။
လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ အသံပိုင်ရှင်ကို မတွေ့ရတော့ချေ. သို့သော် သူ့ရှေ့တွင် ပန်းကန်ပြားတစ်ချပ် ရောက်နေသည်ကို ထိတ်လန့်တကြားတွေ့လိုက်ရပြန်သည်။
သေသေချာချာ ကြည့်လိုက်မိတော့ ပန်းကန်ပြားသည် အချို့နေရာတွင် ကျယ်လျက် အချို့နေရာတွင်မူ ပုံစံတူ အကန့်လေးများ ခွဲလျက် ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရပြန်သည်။
ထိုပန်းကန်ပြား၏ နာမည်က သူ့ခေါင်းထဲသို့ ဖျတ်ခနဲ ၀င်လာခဲ့သည်။
သူ့ရှေ့တွင် ရှိနေသော ပုံစံခွက်ကို ယောင်အမ်းအမ်းဖြင့် စိုက်ကြည့်နေခဲ့ရာက သတိရပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကဲခတ်မိလိုက်သည်။
သူ့ဘေးနားက လူတွေလည်း သူ့လို ပုံစံခွက်ထဲတွင် စားသောက်ဖွယ်ရာများကို ထည့်စားနေကြသည်။
အပေါ်ထပ်မှာ ထိုင်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရော…
လှေကားရင်းနားမှာ ထိုင်နေတဲ့ အ၀တ်အစားခပ်နွမ်းနွမ်း လူတစ်ချို့ကရော…
နေရာဒေသ ပတ်ဝန်းကျင်သာ ကွဲပြားချင်ကွဲပြားသွားမည်.
အားလုံးတူညီနေသော အချက်ကား သူတို့အားလုံးလက်ထဲတွင် ပုံစံခွက် တစ်ခုစီ ရှိနေကြခြင်း ဖြစ်လေသည်။
တစ်စုံတစ်ရာကို သတိရမိလိုက်သလို ဖြစ်သွားခဲ့ပြီး သူဝင်လာခဲ့သော တံခါးမကြီးဆီသို့ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ လူသစ်တွေ ၀င်လာမစဲ တသဲသဲ ဖြစ်နေကြသည်ကို တွေ့လိုက်ရပြန်သည်။
သူတို့လက်ထဲတွင် ဘာမှ ကိုင်ဆောင်မလာခဲ့ပါ.
သူဝင်လာခဲ့စဉ်တုန်းကလည်း သူ့လက်ထဲတွင် မည်သည့်အရာမျှ ကိုင်ဆောင်မထားခဲ့ပါ.
မဟုတ်သေးပါဘူး. ငါတစ်ခုခုကိုတော့ ယူလာခဲ့ပါတယ်.
သူ့ကိုယ်ကို သေချာပြန်စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တော့ သူ့မှာ ရေဗူးတစ်ဗူးနှင့် မုန့်ခြောက်တစ်ချို့ ပါလာခဲ့သည်ကို သတိရသွားမိခဲ့သည်။
ဟုတ်သည်။ ဒီအခန်းထဲသုိ့ သူဝင်မလာခင်က သူ့တွင်ရေဗူးတစ်ဗူး ပါလာခဲ့သည်။ မုန့်တစ်ချုိ့လည်း ပါလာခဲ့သေးသည်။
အခန်းထဲသို့ ၀င်လာသော လူသစ်များအားလုံးတွင်လည်း သူကဲ့သို့ပင် ရေဗူးတစ်ဗူးစီနှင့် မုန့်ထည့်သော အိတ်လေးတစ်လုံးစီ လွယ်ထားလျက် ရှိနေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။
ခန်းမကျယ်ကြီးထဲသို့ ရောက်ရှိနေသော လူများအားလုံးကို လျှပ်တစ်ပြက် အကဲခတ်ကြည့်လိုက်တော့ အချို့က စားလည်းစားသည်။ ရေဗူးထဲသို့လည်း ရေဖြည့်ကာ တစ်ဝိုင်းမှ တစ်ဝိုင်းသို့ ကူးသွားနေကြသည်။
အချို့ကတော့ ရေဗူးထဲသို့ ရေဖြည့်ရန်၊ မုန့်အိတ်အတွင်းသို့ မုန့်အသစ်များ ဖြည့်တင်းရန် မစဉ်းစားမိဘဲ စားပွဲဝိုင်းပေါ်တွင် တင်ထားသော ရေခွက်များထဲမှ ရေများကိုသာ အဆက်မပြတ်သောက်သုံးရင်း၊ စားဖွယ်ရာများကို အငမ်းမရ စားသောက်ရင်း နောက်တစ်ဝိုင်းသို့ ကူးသွားကြသည်။
အချို့ကတော့ စားပွဲဝိုင်းပေါ်တွင် ရှိနေသော ရေများထက် သူတို့တွင်ရှိသော ရေဗူးထဲမှ ရေများကိုသာ ယုံယုံကြည်ကြည်ဖြင့် သောက်သုံးရင်း နောက်ထပ် စားပွဲဝိုင်းတစ်ခုတွင် ထိုင်စားနေကြပြန်သည်။ သူတို့တွင် ရေနည်းနေသည်ကို သိသော်လည်း ရေဖြည့်ရန်ကိုမူကား စိတ်မကူးကြချေ….
ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကဲခတ်ကြည့်မိရင်းက အနီးဆုံးဖြစ်သော သူထိုင်နေသည့် စားပွဲဝိုင်းကို ပြန်ငုံ့ကြည့်မိသည်။
စားစရာတွေ အလျှံပယ်ဖြစ်သော်လည်း စားပွဲပေါ်တွင် သတိပေးစာတစ်ခု ကပ်ထားသည်။
“မိမိပုံစံခွက်ထဲတွင် ဆန့်သလောက်သာ ထည့်စားရမည်။ ကြိုက်သလောက် ယူစားနိုင်သည်။ မဆန့်မပြဲစားလျှင် ခန်းမကျယ်ကြီးထဲမှ အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားရမည်။”
ထိုသတိပေးစာကြောင့် ဖြစ်မည်ထင့်။ လူတိုင်း စားသောက်ကြသော်လည်း ပုံစံခွက်ထဲတွင် ဆန့်သလောက်သာ စားနေကြလေသည်။ တစ်ချို့ကမူ ပါလာသော မုန့်အိတ်လေးထဲသို့ စားစရာများ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ဖြင့် ထိုးထည့်နေကြလေသည်။
သူ့ရှေ့တွင် ရှိသော ပုံစံခွက်ကို သူငုံ့ကြည့်မိပြန်သည်။
အကန့် သုံးကန့်ခွဲထားသည်။ တစ်ကန့်က အကျယ်ဆုံးဖြစ်သည်။ အရေးအကြီးဆုံး Main Course အစားအစာ အတွက် ဖြစ်မည်ထင်သည်။ ထမင်းကြိုက်သူ ထမင်း၊ ခေါက်ဆွဲကြိုက်သူခေါက်ဆွဲ စသည်ဖြင့် ထည့်စားနိုင်ရန် အကန့်ကျယ်ကျယ် ပေးထားခြင်း ဖြစ်မည်ထင်သည်။
ဒုတိယအကန့်နှင့် တတိယအကန့်သည်ကား ပုံစံသိပ်မကွဲပြားလှချေ။ သို့သော် ပထမအကန့်ထက်တော့ ကျဉ်းမြောင်းကြလေသည်။
သူ့ဘေးနားတွင် ထိုင်နေသော ပုဂ္ဂိုလ်၏ ပုံစံခွက်ကို အကဲခတ်ကြည့်မိပြန်သည်။
ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည် သူ့အရင်ရောက်နှင့်နေသော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။
သူသည် ထမင်းကို နှစ်ခြိုက်စွာ စားသောက်နေခဲ့လေသည်။ စည်းကမ်းရှိစွာဖြင့်လည်း စားသောက်နေသည်ကို သူသတိထားမိသည်။ သူ့အား ကကြီးဟူ၍ စိတ်ထဲမှ နာမည်ပေးလိုက်မိသည်။
ကိုကကြီးသည် သူလိုသလောက်ကိုသာ စားပွဲဝိုင်းပေါ်မှ ခူးခပ်၍ စားသောက်သည်။ သူ့ပန်းကန်ထဲတွင်လည်း ဟင်းများ ထမင်းများ ပေကျံမနေအောင် သတိထား၍ စားသည်။ စားသောက်ပြီး၍ နောက်တစ်ဝိုင်းသို့ မကူးခင် သူ့ရေဗူးအတွင်းသို့ ရေဖြည့်သည်။ မုန့်အိတ်အတွင်းသို့ အစားအသောက်တစ်ချို့ ဖြည့်တင်းသည်။ ထို့နောက် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာဖြင့် နောက်တစ်ဝိုင်းသုိ့ ကူးသွားခဲ့လေသည်။ အခြားစားပွဲဝိုင်းများတွင် ဘာတွေဖြစ်နေပျက်နေသည်ကို သူစိတ်မ၀င်စား။ သူ့ဗိုက်ကိုသာ သူဖြည့်တင်း၍ သူလိုရာကို ယူငင်သွားခဲ့သည်။ သို့သော် မည်သူ့ကိုမျှလည်း ဒုက္ခမပေးသဖြင့် သူသည် လူကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်သည်ကတော့ သေချာနေခဲ့လေသည်။ သူ့တာဝန်သူကျေပွန်စွာ လုပ်ဆောင်သွားသော ကိုကကြီးဆိုသည့် လူကောင်းတစ်ယောက်အတွက် သူကျေနပ်စွာ ပြုံးလိုက်မိသည်။
သူ့ရှေ့တည့်တည့်တွင်ထိုင်နေသော ပုဂ္ဂိုလ်ကို အကဲခတ်မိပြန်သည်။ သူသည်ကား ခေါက်ဆွဲကြိုက်သော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ သူ့အား ခခွေးဟူ၍ နာမည်သတ်မှတ်လိုက်သည်။ ခခွေး၏ ပုံစံခွက်သည် အနည်းငယ် ညစ်ပတ်နေခဲ့သည်။ သူ စားချင်ရာကို ခူးခပ်စားသောက်သလို သူ့ဘေးနားတွင် ထိုင်နေသော ခြေထောက်မသန်သည့် လူငယ်လေးတစ်ယောက်အတွက်လည်း ဟင်းခွက်များ ကူထည့်ပေးနေလေသည်။ စားသောက်ရာတွင် ဣနြေ္ဒ သိပ်မရလှသော်လည်း သူသည် သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှ လူများကိုပါ ကူညီ၍ ဟင်းပွဲများ ခူးခပ်ပေးတတ်သူ ဖြစ်လေသည်။
သူစားပွဲဝိုင်းမှ ထကာ နောက်တစ်ဝိုင်းသုိ့ ကူးသွားတော့ ကျန်ရစ်ခဲ့သူများက သူ့အကြောင်းကို တဖွဖွ ပြောမဆုံးဖြစ်နေကြလေသည်။ ထိုသူသည်ကား မိမိအတွက်သာမက တစ်ပါးသူအတွက်ပါ တာဝန်ကျေပွန်သော လူကောင်းလူတော် တစ်ယောက်ပင် ဖြစ်လေသည်။ ခခွေးကဲ့သို့သော လူများများ ရှိလျှင် တံခါးမကြီးမှ ဆက်ဝင်လာသော ချို့တဲ့နွမ်းပါးသူများ၊ ကိုယ်လက်အင်္ဂါချို့ယွင်းနေသူများအတွက် တော်တော်အကူအညီရပေလိမ့်မည်။
ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ စားပွဲဝိုင်းတွင် ထိုင်နေသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကို သူသတိထားမိလိုက်သည်။ သူ့အား ဂငယ်ဟု နာမည်ပေးလိုက်သည်။ ဂငယ်သည်ကား သူ့ပုံစံခွက်ကို ငုံ့ကြည့်လိုက်၊ တစ်ခြားစားပွဲဝိုင်းမှ လူများ၏ ပုံစံခွက်များအား လှမ်းကြည့်လိုက်၊ ပါးစပ်မှ တစ်စုံတစ်ရာကို မကျေမချမ်း ရေရွတ်လိုက်ဖြင့် စိတ်တို ဒေါသထွက်နေသည်ကို သူသတိထားမိလိုက်သည်။ တစ်ခြားသူများ စားသောက်ပြီး ထသွားတတ်ကြလျှင်လည်း ထိုသူများအား မကြားတကြား ဆဲဆိုနေတတ်သေးသည်။ တစ်ချို့က ဂငယ်အား ပြန်ပြီး ရန်တွေ့တတ်ကြသော်လည်း တစ်ချို့ကမူ မသိလိုက်မသိဖာသာဖြင့် နောက်စားပွဲဝိုင်းတစ်ခုသို့ ကူးသွားကြလေသည်။
သေသေချာချာ ပြန်ကြည့်မိလိုက်တော့မှ စားပွဲဝိုင်းများသည် လှေကားပေါ်သို့လည်း တက်သည်။ မြေညီထပ်တွင်လည်း ဆက်လက်ကျယ်ပြန့်သွားသည်။ မြေအောက်ခန်းသို့လည်း ဆင်းသွားသေးသည်။ ပုံစံခွက်ကိုင်ထားသော လူများ၏ အရောင်အဆင်းသည် သူတို့စားသောက်သော အစားအသောက်များပေါ် မူတည်လျက် ကွဲပြားလာတတ်ကြသည်။ ထိုအရောင်အဆင်းပေါ် မူတည်လျက် လူတို့သည် သူတို့နှင့် သက်ဆိုင်ရာ၊ သူတို့ကို လက်ခံသော စားပွဲဝိုင်းနောက်တစ်ခုသို့ ကူးလူးသွားနိုင်ကြခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း သူသိလိုက်ရလေသည်။
သို့မဟုတ် စွပ်ပြုတ်ကိုသာ သောက်ရမည်လော၊
ဗိုက်ကတော့ ဆာနေသည်မှာ သေချာလေသည်။
ထမင်းတစ်ဇွန်း ခူးစားလိုက်သည်။ ကောင်းတော့ကောင်းသည်။ သိပ်တော့ မကြိုက်လှချေ။
ခေါက်ဆွဲတစ်ဇွန်း ခပ်ထည့်လိုက်သည်။ ထမင်းနှင့်ရောနယ်လိုက်သည်။
စားကြည့်လိုက်တော့ ထမင်းအရသာနှင့် ခေါက်ဆွဲအရသာ ရောနေသည်ကို မနှစ်မြို့စွာ တွေ့ရှိလိုက်ရသည်။
ကကြီးက သူ့ကိုလှမ်းကြည့်သည်။ ခခွေးက ပြုံးပြသည်။ ဂငယ်ကတော့ တဟားဟား အော်ရယ်နေခဲ့လေသည်။
ကကြီးကို သူတည့်တည့်ပြန်ကြည့်လိုက်သည်။ ကကြီး ခေါင်းငုံ့သွားသည်။ ထမင်းဆက်စားနေခဲ့လေသည်။
ခခွေးကို ပြန်ပြုံးပြလိုက်သည်။ ပြုံးရာမှ ကိုယ့်ဒုက္ခကို ပြန်လှောင်ရယ်ချင်စိတ်ပေါက်လာပြီး ရွဲ့ကာ အော်ရယ်ပစ်လိုက်သည်။ ခခွေးကလည်း သူ့ဗိုက်ပူပူကြီးကို ပုတ်ပြီး တဟားဟားဖြင့် မျက်ရည်များထွက်အောင် အော်ရယ်သည်။ ခခွေးဘေးနားတွင်ထိုင်နေသော လူငယ်လေးကလည်း ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြင့် ပြုံးနေလေသည်။
သူအော်ရယ်လိုက်တော့ ဂငယ်တစ်ယောက် မျက်နှာစူပုပ်သွားသည်ကို သတိထားမိလိုက်သည်။
သူ့ပုံစံခွက်ထဲမှ ထမင်းနှင့်ခေါက်ဆွဲ အလုံးအထွေးကြီးကို သူ့ဘေးနားရှိ အမှိုက်ပုံးအတွင်းသို့ သွန်ချလိုက်သည်။ ထိုအခြင်းအရာကို အစအဆုံးမြင်သော အခန်းထောင့်မှ လူတစ်ယောက်က သူ့လက်ထဲမှ နာရီကြီးတစ်လုံးကို ကိုင်မြှောက်ပြသည်။ ထိုသူသည်ကား နာရီကိုင်ထားပြီး လူတကာကို လိုက်ပြနေတတ်သောကြောင့် သူ့အား နငယ်ဟု နာမည်ပေးလိုက်မိပြန်သည်။ နငယ်အား လှမ်းကြည့်ရင်း သူ့ခေါင်းကို ဆတ်ခနဲ တစ်ချက်ငြိမ့်ပြလိုက်သည်။
သူ၏ ပုံစံခွက်ကို ပြောင်လက်နေအောင် သေသေချာချာ ပြန်လည် သန့်စင်လိုက်သည်။ ကကြီးသည် နောက်တစ်ဝိုင်းသို့ ကူးသွားရန်ပြင်ဆင်နေလေပြီ။ သူသွားမည့် စားပွဲဝိုင်းကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ သူသည် မြေညီထပ်တွင်ရှိသော နောက်ထပ်စားပွဲဝိုင်းတစ်ခုသို့ ကူးရန်ပြင်ဆင်နေခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း သိလိုက်ရသည်။
သူ့ပုံစံခွက်ထဲသို့ ထမင်းဖြူကို ပြန်ထည့်လိုက်သည်။ အကန့်နှစ်ကန့်အတွင်းသို့ ကြက်သားကာလသားချက်နှင့် ငံပြာရည်ကြော်သုံးဇွန်း ခပ်ထည့်လိုက်သည်။
လက်ပတ်နာရီကို ငုံ့ကြည့်မိတော့ သူ့တွင် အချိန်သိပ်မကျန်တော့ချေ။
မကူးခင် သူ့ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါကို ပြန်စစ်ဆေးကြည့်မိတော့ သိပ်မတောက်ပြောင်လှသော်လည်း သိပ်တော့ မညှိုးနွမ်းလှဟု ထင်မိသည်။
စားသောက်ပြီး စားပွဲဝိုင်းမှ ထရပ်လိုက်သည်။ စားပွဲဝိုင်း စစ်ဆေးရေးမှူးရှေ့တွင် ရပ်လိုက်သည်။ ခခွေးက သူ့ရှေ့တွင် တန်းစီနေခဲ့လေသည်။ ခခွေးမျက်နှာ ပြုံးရွှင်နေခဲ့သည်ကို သူတွေ့လိုက်ရသည်။ ခခွေးက သူ့ကို လက်လှမ်းပြရင်း သူသွားတော့မည်ဟု နှုတ်ဆက်သည်။ ခခွေးထွက်သွားရာကို လိုက်ကြည့်မိတော့ လှေကားပေါ်သို့တက်သွားသည်ကို ၀မ်းမြောက်စွာ တွေ့လိုက်ရလေသည်။
ကကြီးသည် စားသောက်နေရာမှ တစ်ချက်ခေါင်းမော့ကြည့်သည်။ ထို့နောက်ဆတ်ခနဲ ခေါင်းပြန်ငုံ့ကာ သူ့ရေဗူးအတွင်းသို့ ရေများ ထပ်ဖြည့်နေခဲ့လေသည်။
ဂငယ်သည် စစ်ဆေးရေးမှူးဆီသို့ ပြေးသွားခဲ့ပြီး ခခွေးစားသောက်သည်မှာ အင်မတန်ညစ်ပတ်ကြောင်း ကုန်းထိုးစကားသွားပြောလေသည်။
“သူက စားတာသောက်တာညစ်ပတ်ပေမယ့် လူတွေကို ကူညီတတ်တယ်ကွ. အပေါ်ထပ်မှာ သူ့ကို လိုအပ်နေတယ်. ဒါကြောင့် ငါအပေါ်ထပ်ကိုလွှတ်လိုက်တာ.”
“ဟာ. ဘာဆိုင်လို့လဲ. ကိုကကြီးဆို စားတာသောက်တာ အင်မတန်သပ်ရပ်တာ. စိတ်ကောင်းလည်းရှိတယ်. သူ့ကို ဘာကြောင့် အပေါ်မလွှတ်သလဲ.”
“သူက သပ်ရပ်ပေမယ့် သူ့ထမင်းပဲ သူသိတယ်. တစ်ခြားလူတွေ ဘာတွေလုိအပ်နေတယ်ဆိုတာကို မကြည့်တတ်ဘူး. ခခွေးလိုလူမျိုးတွေက အပေါ်ရောက်လေ လိုအပ်နေတဲ့သူတွေကို ငုံ့ကြည့်တတ်လေ ဖြစ်မှာမို့ အပေါ်ကိုပို့လိုက်တာ.”
စစ်ဆေးရေးမှူးက သူပြောနေသည်ကို ခဏရပ်ပြီး ဂငယ်ကို လှမ်းကြည့်သည်။ ပြီးတော့ ဆက်ပြောသည်။
“ဒါကြောင့် ခခွေးကို အပေါ်ထပ်ကို ပို့ပြီး ကကြီးကိုတော့ မြေညီထပ်မှာပဲ ထားတာ.”
ဂငယ်သည် မကျေမချမ်းဖြင့် စစ်ဆေးရေးမှူးနားမှ ချာခနဲ လှည့်ထွက်သွားခဲ့လေသည်။
ထို့နောက်တွင်တော့ သူ့ဝသီအတိုင်း စစ်ဆေးရေးမှူး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်မှားကြောင်းကို မြည်တွန်တောက်တီးနေခဲ့လေသည်။
စစ်ဆေးရေးမှူးက စကားရှည်ရှည်ဝေးဝေး မပြောဘဲ သူ့အတွက် စားပွဲနံပါတ် ထုတ်ပေးလိုက်လေသည်။
သူ့နောက်မှ တန်းစီနေသူက သူ့အား တိုးတိုး လှမ်းပြောသည်။
သူအရမ်းအံ့အားသင့်သွားခဲ့လေသည်။ သူ့ကို ဘာကြောင့် မြေအောက်ခန်းကို ပို့တာပါလိမ့်ဟုသာ အကြိမ်ကြိမ်မေးနေခဲ့လေသည်။
စစ်ဆေးရေးမှူးက တစ်ခွန်းထဲ ပြန်ဖြေလေသည်။
“မင်း ပုံစံခွက်ကို ကောင်းကောင်းအသုံးမချတတ်သေးလို့ မြေအောက်ခန်းကိုပို့တာ”
“မဗျာနဲ့. မင်းမှာ အရည်အချင်းရှိတယ်. ဒါပေမယ့် အချိန်ကိုက်မလုပ်တတ်သေးဘူး. ဒါကို မင်းပြင်လာနိုင်မယ့်တစ်နေ့ကို ငါမျှော်လင့်နေမယ်.”
၀မ်းနည်းမိသည်။ သူ့မိတ်ဆွေများ လှေကားပေါ်တက်သူတက်၊ မြေညီထပ်တွင် အခြေကျသူကျနေချိန်တွင် သူကတော့ မြေအောက်ခန်းသို့ ဆင်းရပေဦးမည်။
၀မ်းသာမိသည်။ စစ်ဆေးရေးမှူး၏ စကားသည် သူ့အတွက် ခွန်အားတစ်ရပ်ဖြစ်စေသည်။ သူ့စကားသည် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ဆုံးမစကားတစ်ခွန်းပင်ဖြစ်သည်။
စားပွဲနံပါတ် ၀၀၈ ကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ကိုင်ရင်း မြေအောက်ခန်းဖက်သို့ သူဦးတည်လိုက်သည်။
“မင်းစိုက်ပျိုးသလို မင်းရိတ်သိမ်းရမှာ ဓမ္မတာပဲလေ”
သူ့အဖြစ်အပျက်ကို ဂငယ်သိသွားတော့ သူ့နားလာရပ်သည်။
“စိတ်မကောင်းပါဘူးကွာ. မင်းအတွက် ငါအမြဲ ဆုတောင်းပေးနေပါမယ်.”
ဂငယ်၏ မျက်လုံးများကို စိုက်ကြည့်လိုက်တော့ ဂငယ်၏ ခံစားချက်အမှန်သည် ကန့်လန့်ကာနောက်ကွယ်တွင် ရပ်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။
ပက်ခနဲ ပြန်ပြောလိုက်မည် စိတ်ကူးလိုက်သေးသည်။
“ရပါတယ်ဗျာ. တစ်နေ့ ပြန်တွေ့ဦးမှာပဲ. ဒါက လမ်းဆုံးမှမဟုတ်သေးတာ. တစ်နေ့ ကျွန်တော် ပြန်လာဦးမှာပါ. ဟတ်ဟတ်ဟတ်”
သူ၏ ခပ်ထေ့ထေ့ရယ်သံကို ကြားလိုက်ရတော့ ဂငယ်၏ မျက်နှာ မည်းခနဲ တစ်ချက်ဖြစ်သွားခဲ့သည်ကို သတိထားမိလိုက်သည်။
သို့သော် ဂငယ်သည် လူတစ်ဖက်သား အောင်မြင်နေချိန်တွင် ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ၀မ်းနည်းတတ်သလောက် လူတစ်ဖက်သား ကျရှုံးနေချိန်တွင်မတော့ အော်စကာဆု ဆယ်ဆုရလောက်အောင် ၀မ်းနည်းပူဆွေးရုပ်ကို ဖန်တီးတတ်သူ ဖြစ်နေခဲ့လေသည်။
ဂငယ်နှင့် အပေါင်းပါများကို သူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့် ကျောခိုင်းလိုက်သည်။
စမ်းတ၀ါးဝါးဖြင့် သူ၏ စားပွဲနံပါတ်ရှိရာသို့ လှမ်းလျှောက်သွားခဲ့သည်။
အမှန်တကယ်တော့ မြေအောက်ခန်းသည် ပကတိမှောင်မည်းနေသည်ကား မဟုတ်ချေ.
မြေညီထပ်သည် လင်းလွန်းနေခဲ့ခြင်းကြောင့်သာ မြေအောက်ခန်းသည် မည်းမှောင်နေသည်ဟု လူအများက ထင်နေကြခြင်းသာ ဖြစ်လေသည်။
အမှောင်ထဲတွင် ကျင့်သားရသွားတော့ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကဲခတ်ကြည့်မိသည်။
တစ်ချို့ အ၀တ်များစုတ်ပြဲနေကြသည်။ ၀မ်းဗိုက်များ ဟာနေကြသည်။ သို့သော် မြေအောက်ခန်းမှ အပေါ်သို့တက်နိုင်ရန်အတွက် အမြဲမပြတ် ကြံစည်အားထုတ်နေကြသည်ကို တွေ့ရသည်။
အချို့သည်ကား မြေအောက်ခန်းတွင်းသို့ ရောက်သည်နှင့် ချုံးပွဲချငိုကြွေးကြသည်။ ထိုင်ခုံပေါ်တွင်ပင် မထိုင်နိုင်ဘဲ ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ ပြိုလဲကုန်ကြသည်။ အားပြတ်ချည့်နဲ့စွာဖြင့် လှဲအိပ်ရင်း အိတ်ထဲမှ စောင်ထုတ်ကာ ခေါင်းမြီးခြုံအိပ်လိုက်ကြတော့သည်။
အချို့သည်ကား မြေအောက်ခန်းနံရံနှင့် သူတို့၏ ခေါင်းများကို မကြာခဏ မိတ်ဆက်ပေးနေကြလေသည်။ အပြစ်တင်သံများ၊ ရေရွတ်သံများ၊ ဆဲဆိုသံများ၊ ဘုရားစာ ရွတ်သံများ၊ ငိုကြွေးမြည်တမ်းသံများဖြင့် မြေအောက်ခန်းသည် ပို၍ မည်းမှောင်သွားခဲ့သည်ဟု သူခံစားလိုက်ရသည်။
မီးခြစ်ကို ထောက်ခနဲခြစ်လိုက်ပြီး စားပွဲဝိုင်းပေါ်တွင် ရှိနေသာ ဖယောင်းတိုင်ကို ထွန်းညှိလိုက်သည်။
ကြမ်းပေါ်တွင်လှဲအိပ်နေသော လူတစ်ချို့ သူ့ကို လှမ်းပြီး ရေရွတ်ကြသည်။
လူတိုင်းတွင် အလင်းတိုင် ထွန်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ မိမိဖာသာ လင်းချင်းအောင် မထွန်းညှိနိုင်ဘဲ တစ်ခြားသူများ ထွန်းညှိသည်ကို အပြစ်ပြောတတ်ကြသည့်သူများ မြေအောက်ခန်းတွင် ရှိနေတတ်သေးသည်ကို ၀မ်းနည်းစွာ တွေ့ရှိလိုက်ရသည်။
သူက ကြိုးစားရှင်းပြတော့ ထိုသူများက ပြန်ပြောလေသည်။
ဟုတ်သည်။ ဘ၀တူချင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် စိတ်ဓာတ်ကား မတူနိုင်.
သူအိပ်ရမည့် အိပ်ယာခေါင်းရင်းတွင် စာတစ်ပုဒ်ရေးခြစ်လိုက်သည်။
“I create my meanings. I create my values. That is the highest freedom.”
“ ငါ့ဘ၀အဓိပ္ပါယ်ကို ငါဖန်တီးတယ်၊ ငါရွေးချယ်တယ်၊ ငါ့အတွက် ဘယ်ဟာ တန်ဖိုးရှိတယ် ဆိုတာကို ငါဖန်တီးတယ်။ ငါရွေးချယ်တယ်။ အဲဒါဟာ ငါ့ရဲ့ အမြင့်ဆုံးလွတ်လပ်မှုဖြစ်တယ်.”
သူ့ဘေးနားတွင်လှဲအိပ်နေသော ပုဂ္ဂိုလ်က သူရေးထားသော စာသားများကို မြင်တော့ တဟားဟားဖြင့် ဟားတိုက်ရယ်မောလေသည်။
“မဖြစ်နိုင်တာကွာ. မင်းက မြေအောက်ခန်းထဲမှာ နေနေရတာကို လွတ်လပ်ချင်နေသေးတယ်. ဟားဟားဟား… ငါက မင်းကို စေတနာနဲ့ ပြောတာပါ. သိပ်ပြီးတော့ ဘ၀င်လေဟပ်မနေနဲ့ အကျနာမယ်. ဟင်းဟင်းဟင်း”
သူ့အားလှောင်ရယ်နေသော ပုဂ္ဂိုလ်၏ မျက်နှာအား စေ့စေ့ကြည့်ရင်း…
“ကိုယ့်ဘ၀မှာ ကောင်းတာတွေဖြစ်လာအောင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ပြီး၊ တာဝန်ယူပြီးတော့ ဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့လူဟာ လွတ်လပ်တဲ့ဖက်ကို သွားနေတဲ့သူဖြစ်တယ်. လူတွေရဲ့ ချီးမွမ်းမှု၊ ကဲ့ရဲ့မှုကို မတုန်လှုပ်တဲ့သူဟာ သူ့ဘ၀ကိုသူ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖန်တီးနိုင်တယ်.”
နားမလည်သောသူများကို နားလည်အောင်ရှင်းပြဆိုလျှင် ရှင်းပြနိုင်ပါသည်။ သို့သော် နားမလည်ချင်သူများကို နားလည်အောင် ရှင်းပြရန်ကား ဘုရားပင် တတ်နိုင်မည် မဟုတ်ချေ။
သူ့မျက်လုံးများကို မှေးစင်းလျက် ဘုရားစာတစ်ချို့ကို ခပ်တိုးတိုးရေရွတ်မိနေလေသည်။
ယထာ ကာရီ၊ တထာ ၀ါဒီ…
ပြောသလို လုပ်တဲ့သူ၊ လုပ်သလိုပြောတဲ့သူ”
ထိုညက သူ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်သွားခဲ့လေသည်။ မြေအောက်ခန်းတွင် နေထိုင်နေရသော်လည်း သူ၏ စိတ်ဓာတ်သည် အာကာထက်တွင် ၀ဲပျံနေခဲ့လေသည်။
သူ စားပွဲဝိုင်းတွင် စာထိုင်ဖတ်နေစဉ် စစ်ဆေးရေးမှူးထံမှ ခေါ်စာ ရောက်လာခဲ့လေသည်။
ကကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ဟိုးခပ်လှမ်းလှမ်းက စားပွဲဝိုင်းမှာ သူ့ထုံးစံအတိုင်း သိုသိပ်ကျစ်လျစ်စွာ စားသောက်နေခဲ့လေသည်။
ခခွေးသည်ကား လှေကားပေါ်မှ ငုံ့ကြည့်လိုက်၊ အကူအညီလိုသူများကို အကူအညီပေးလိုက်ဖြင့် ပျော်ရွှင်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။
“ခခွေးကို မကြာခင် ခုနစ်ထပ်ကို ပို့တော့မယ်. အဲဒါအမြင့်ဆုံးအထပ်ပဲ.”
စစ်ဆေးရေးမှူးက သူ့ကို ခပ်တိုးတိုးပြောသည်။
အခန်းထဲသို့ လှည့်ပတ်ကြည့်လိုက်တော့ ဂငယ်ကိုတွေ့ရသည်။
ဂငယ်၏ နှုတ်ခမ်းသည် နဂိုရှိရင်းစွဲထက် ပိုပြီး စူထွက်လာသည်ဟု သူမြင်မိသည်။
သို့တည်းမဟုတ် အမြဲတစေ ငြူစူစောင်းမြောင်းနေတတ်ခြင်းကြောင့် လုပ်ယူမှုသည် အမှန်တကယ်ဖြစ်နေသယောင်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ ဂငယ်သည်ကား ယခင်အတိုင်း ငြူစူစောင်းမြောင်း ရေရွတ်မြည်တမ်းတတ်နေဆဲပင် ဖြစ်သည်။
သူ့ကိုမြင်တော့ ဂငယ်တစ်ယောက် စစ်ဆေးရေးမှူးနားသို့ အပြေးတစ်ပိုင်း လမ်းလျှောက်လာခဲ့သည်။
“အဆင်ပြေလား ….. ”
“အကြာကြီးပဲနော်. ငါက မင်းအတွက် စိတ်ပူနေတာ”
သူ့နှုတ်ခမ်းထောင့်တွင် အပြုံးတစ်ချက် ခပ်ကွေးကွေးလေးဖြစ်သွားခဲ့ပြန်သည်။
“ရပါတယ်. စိတ်မပူပါနဲ့လေ. ကျွန်တော့်မှာ အားကိုးရှိပါတယ်.”
“ဘာလဲ. မင်းက အဆက်အသွယ်ကောင်းလို့ အပေါ်ပြန်တက်လာနိုင်တာလို့ ဆိုချင်တာလား”
“အဆက်အသွယ်. ဟုတ်လား. ဟတ်ဟတ်ဟတ်.”
“ဘာရယ်တာလဲကွ. မဟုတ်လို့လား. ဘုရားတောင်မှ အမှီရှိမှပွင့်တယ်လေ.”
“ကျွန်တော် အချိန်သိပ်မရှိဘူးဗျာ. စစ်ဆေးရေးမှူးနဲ့တွေ့ရဦးမယ်. ခင်ဗျားနဲ့နောက်မှတွေ့မယ်နော်… တာ့တာ.. ဆီးယူ…”
ဂငယ်တစ်ယောက် မည်သို့မည်ပုံ ဖြစ်ကျန်ခဲ့မည်ကို တွေးနေစရာ လိုမည်မထင်ပါ.
စစ်ဆေးရေးမှူးက သူ့မျက်နှာကို စိုက်ကြည့်ရင်း ၀မ်းသာအားရပြောသည်။
“မင်းကို အပေါ်ထပ်ပို့ဖို့ ငါတို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ. ငါလုံးဝထင်မထားဘူးကွာ. မင်းဒီလိုပြန်ဖြစ်လာမယ်လို့ပေါ့…”
“ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. စစ်ဆေးရေးမှူးကြီးရယ်. ကျွန်တော်လည်း ဒဏ်ရာတွေပွနေပါပြီ. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က တန်ဖိုးရှိတဲ့ အဆုံးအမအောက်မှာ ခံယူချက်တွေ ယုံကြည်ချက်တွေကို စနစ်တကျ ပြုစုပျိုးထောင်တတ်သူပါ.”
“ကောင်းတယ်ကွာ. ဘယ်တော့မှ မကျတာထက် ကျတိုင်း ပြန်တက်နိုင်တာကမှ လူအစစ်ကွ. အညွန့်တလူလူဖြစ်နေအောင် မင်းဆက်ကြိုးစားရမယ်.”
စားပွဲနံပါတ်များ တဖြည်းဖြည်း မြင့်တက်သွားကြသည်။
ခခွေးနှင့်လည်း အကြိမ်ကြိမ် စကားပြောဖြစ်သည်။ ခခွေးနှင့်တူသော၊ ခခွေးထက်ပို၍ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သော လူများနှင့်လည်း တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့သည်။
သူ့အိပ်ယာခေါင်းရင်းတွင် ချိတ်ဆွဲထားသော ဆုံးမစာများလည်း ပြောင်းလဲလာခဲ့လေသည်။
“ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပုံမှန်နေ၊ လုပ်သင့်တာတွေလုပ်၊ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနေ၊ သူများအပေါ် သဘောထား ကောင်းကောင်းထား၊ ကိုယ့်အရည်အချင်းတွေ တိုးတက်အောင် ကြိုးစားနေ၊ ကိုယ့်အရည်အချင်းတွေကို များများထုတ်သုံးနေ၊ အဲသလိုနေတဲ့သူကို လူတွေက ပိုပြီး ချစ်တယ်၊ လေးစားတယ်။ ငါ့ကိုမချစ်ဘူးထင်တယ်လို့ တွေးပြီး တစ်ခြားလုပ်သင့်တာတွေကို မလုပ်နိုင်ဘဲ ဒီအတွေးနဲ့ အချိန်ကုန်နေတဲ့သူဟာ အချစ်မခံရဘူး။”
“ကိုယ့်လွတ်လပ်မှု မပျောက်ချင်ရင် သဘာဝမကျတာ၊ အကြောင်းအကျိုးမကိုက်တာကို ဘယ်တော့မှ မယုံဘူးလို့ ပြတ်ပြတ်သားသား ခိုင်ခိုင်မာမာ သတ္တိရှိရှိ ဆုံးဖြတ်ထားရမယ်.”
“ကိုယ့်လွတ်လပ်မှုကို တန်ဖိုးထားရင် သူတစ်ပါးရဲ့ လွတ်လပ်မှုကိုလည်း တန်ဖိုးထားမှ ဖြစ်မယ်. ကိုယ့်လွတ်လပ်ခွင့်ဟာ သူတို့လွတ်လပ်ခွင့်ကို အန္တရာယ်ဖြစ်အောင် မလုပ်ရဘူး…”
“ကိုယ့်ကို နှိမ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့သူ၊ ရှုတ်ချနိုင်တဲ့သူဟာ ဒီလောကမှာ တစ်ယောက်ပဲ ရှိတယ်။ အဲဒီ့သူဟာ ကိုယ်ပဲ၊ တစ်ခြားသူမဟုတ်ဘူး…”
“ငါ ဘာကိုတန်ဖိုးထားပြီး နေသွားနေသလဲ၊ ငါတန်ဖိုးထားတာပေါ်မှာ ငါ့ယုံကြည်မှု ဘယ်လောက် ခိုင်မာသလဲ၊ အဲဒါပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ ငါ့စိတ်ဓာတ်အင်အား၊ ငါ့ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ၊ ငါ့စိတ်ရဲ့ စုစည်းမှုဆိုတာတွေ ဖြစ်လာတာ…”
သူ၏ စားပွဲနံပါတ်များ မြင့်မားလာသော်လည်း မပြောင်းလဲသည်မှာကား သူသည် ပုံစံခွက်ဖြင့် စားသောက်နေမြဲဖြစ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
သူ၏ အိပ်ယာအခင်းများ ပိုမိုသန့်စင်ကောင်းမွန်ညက်ညောလာသော်လည်း သူသည် တစ်စုံတစ်ရာကို တစ်နေ့လုပ်မည်ဟု အားခဲရင်း အိပ်မက်များ ဆက်မက်နေဆဲပင် ဖြစ်နေခဲ့လေသည်။
သတ္တလောကတစ်ခုလုံး အိပ်မောကျနေခဲ့လေသည်။ ဩကာသ လောကသည်လည်း ငိုက်မြည်းနေခဲ့လေသည်။
သင်္ခါရလောကသည်ကား ကောင်းကင်တွင်ထွန်းလင်းနေသော လမင်းနှင့်အပြိုင် အားကောင်းနေခဲ့သည်။
ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ တောအုပ်လေးထဲတွင် စမ်းချောင်းလေးသည် သီချင်းဆိုရင်း စီးဆင်းနေခဲ့လေသည်...
ညဉ့်အမှောင်တွင် လူတစ်ယောက် တစ်စုံတစ်ခုကို ကိုင်ရင်း လမ်းလျှောက်နေခဲ့လေသည်။
သူ၏ လက်ထဲတွင် ကိုင်ဆောင်ထားသော အရာမှာ လရောင်တစ်ချက် လင်းလက်လိုက်တိုင်း ပြိုးခနဲပြက်ခနဲ ဖြစ်သွားလေသည်။
ထိုသူ ကိုင်ဆောင်ထားသော အရာကား မည်သည့်အရာ ဖြစ်မည်နည်း….
လမ်းကွေ့တစ်ခု အရောက်တွင် ထိုသူသည် သူကိုင်ဆောင်လာခဲ့သော အရာကို အမှိုက်ပုံးထဲသို့ ပစ်ထည့်လိုက်လေသည်။
သံကို သံဖြင့် ထိခတ်သံတစ်ချို့ ကြားလိုက်ရသည်။
ပဟေဠိဆန်သော ထိုသူ၏ နှုတ်ဖျားမှ စကားတစ်ချို့ ထွက်ကျလာခဲ့သည်ကို အမှောင်ထဲတွင် တိတ်ဆိတ်စွာ နားထောင်နေသော စစ်ဆေးရေးမှူး ကြားလိုက်ရသည်။
“အရေးအကြီးဆုံး တီထွင်မှုက ကိုယ့်ဘ၀ကို ကိုယ်တီထွင်တာပဲ။ ဘ၀ဆိုတာ ပုံသေနေလို့မရဘူး။ တီထွင်ကြံဆပြီး နေသွားရမယ်။ ပုံသေနေလိုက်ရင် ဘ၀ပျောက်သွားမယ်.”
“ဣဒံ ခေါပန ဘိက္ခဝေ ဒုက္ခနိရောဓ ဂါမိနိ ပဋိပဒါ အရိယသစ္စံ…
အယမေ၀ အရိယော အဋ္ဌင်္ဂိကော မဂ္ဂေါ…
သမ္မာဒိဋ္ဌိ သမ္မာသင်္ကပ္ပေါ သမ္မာဝါစာ သမ္မာကမ္မန္တော
သမ္မာအာဇီဝေါ သမ္မာဝါယာမော သမ္မာသတိ သမ္မာသမာဓိ……..”
လမင်းသည်လည်း ပုံမှန်အတိုင်း သာယာထွန်းလင်းနေမြဲဖြစ်သည်။
စမ်းချောင်းလေးသည်လည်း ဆက်လက်စီးဆင်းနေမြဲပင် ဖြစ်လေသည်။
လူတွေရဲ့ စိတ်ကို သုံးသပ် ရေးဖွဲ့ပြီး သတ်မှတ်ထားတာပဲ။
ဖြစ်မလာသေးခင် စိတ်ဓါတ်မြင့်မြင့်ထားပြီး ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာ သိလိုက်တယ်။
ဂငယ်လို လူမျိုးကတော့ တန်ဖိုးအမဲ့ဆုံးပါပဲ။
အတွေးအခေါ်တွေကို လေးစားတယ်ဗျား)
နောက်တစ်ခေါက် ထပ် လာဖတ် သွားပါတယ် ဗျို့ ... :)
One of my dearest, Ko Yan,
Thanks for ur every post.